မြန်မာပြည် လူ့အသိုင်းအဝန်းကြားက ပဋိပက္ခများ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အမျိုးကို တအားချစ်ပြနေသူတွေ … ကြည့်လိုက်ရင် လူလိမ် ၊ သူခိုးနဲ့ လူရှုပ်လူပွေ ၊ ဇိုးသမားတွေချည်းပဲ
ကိုပိုင် ဘက်စုံအရည်အချဉ်း ချို့တဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကို သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လို့ inferiority complex ကြောင့် (Xenophoebia) လူသစ်ကိုကြောက်ကြတာ »
မြန်မာပြည် လူ့အသိုင်းအဝန်းကြားက ပဋိပက္ခများ
.မောင်မြတ်ထင် ရေးသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ၊ ၂၀၁၄
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ လူ့အသိုင်းအဝန်းတွေ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Communal conflict ခေါ်တာပ။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာတာပါ။ အရင်က မဖြစ်ပဲ အခုမှ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ စေ့ငုတဲ့အခါ၊ လား … လား .. ကျွန်တော်တို့ ပြည်မှာ “ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး အဖွဲ့ ကြီး ” တည်ရှိနေပြီတဲ့ဗျ။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်း တဲ့။ အဲသည် ကြောက်စရာကြီးရှိကိုရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့သူက ဆိုနေကြပါပြီ။
လူတော်တော်များများက ရိပ်မိပါတယ်။ သမ္မတကြီးကတောင် နောက်ကွယ်က လူတစ်စုဆိုတာမျိုး ပြောတာပါ။ ပေါလ်ဘရတ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ ဒါမျိုးတွေ အထူးသဖြင့် ဟိန္ဒူ-မွတ်စလင် အဓိကရုဏ်းတွေကို နှစ်ဆယ်ချီကြာအောင် လေ့လာသတဲ့။ သူ့အဆိုအရ ကျွန်တော်တို့ ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို “ ဗုဒ္ဓဘာသာ – မွတ်စလင် တွေကြား လူ့အသိုက်အဝန်း နှစ်ခုကြားက ပဋိပက္ခများလို့ ” ပြောရင်ကို အဲသလို နာမည်တပ်တာမျိုးက မှားတယ်။ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး စနစ်/အဖွဲ့ က အဲသလိုခေါင်းစဉ်တပ်တာမျိုးကို ကြိုက်တယ်။ ဒါမှ သူတို့ “ ဖန်တီးထုတ်လုပ် ” တာ မပေါ်မှာမို့ ပဲတဲ့။ ဆက်လက် ဖတ်ရှုတော်မူကြပါ ခင်ဗျား။
စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးတဲ့ စနစ်/အဖွဲ့ (Institutionalized riot system) ကို အောက်ပါအတိုင်း တည်ဆောက်ထားတာပါ။
မီးမွှေးသူဆိုတဲ့အတိုင်း အသေးအဖွဲ့လေးတွေ၊ ရန်ဖြစ်တာတွေကို သတင်းပြန့် အောင်လုပ်တယ်။ တင်းမာမှုတွေပေါ်အောင် ကြီးထွားအောင် ပုံကြီးချဲ့မယ်။ အပေါ်ယံမှာတော့ အခြေအနေကို တည်ငြိမ် အေးချမ်းအောင် ထိန်းထားလိုတဲ့ ဆန္ဒ သူ့ မှာရှိသလိုလို နေမယ်။ သူဟာ စကော်လာတစ်ယောက် ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ မြန်မာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မွတ်စလင် ကောင်လေး တစ်ယောက်က ခိုးပြေးတာမျိုးကို သူက စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာသာခြား နှစ်ခုကြား ဈေးရောင်းရင်း စကား များတာမျိုးကိုလည်း သူက ဖော်ထုတ်နေတတ်တယ်။ အမုန်းစကားတွေ လွင့်တယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ဖြစ်ဖြစ် ရန်လိုတဲ့စကားတွေ မတူတာတွေ ကွဲပြားတာတွေ ဟောချင်ဟောတယ်။
လူမျိုး ဘာသာမတူတဲ့ အုပ်စုတွေကြား ရန်လိုမုန်းတီးမှုကို တောက်နေအောင် လောင်နေအောင် အဆက်မပြတ် မီးမွှေးထားဖို့ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို ယူတဲ့သူတွေပါပဲ။
ဒီလူတွေကတော့ လုပ်ကြတော့ဟေ့လို့ အချက်ပြပေးတဲ့သူတွေပေါ့။ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဘေးမှာ ရှိနေတာ များတယ်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်အောင် ခု လုပ်မလား၊ မလုပ်သေးဘူးလား။ လူအုပ်ကြီးကို ဘယ်လိုစုစည်းမယ်၊ ဘယ်လမ်းကြောင်း ခေါ်သွားမယ် ဆိုတဲ့ နည်းနာတွေ တတ်တယ်။ တကယ်တော့ အချက်ပြသမားဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတဲ့။ စပါယ်ရှယ်လစ်ဆိုပဲ။ သူက အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် အချက်ပြတယ်။ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ စကားတွေမှာ အလွန် အမင်း ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေ ပါလာပြီ။ ခဲနဲ့ စတင်ပေါက်တဲ့သူပေါ့။ ဒီနောက်တော့ အဲဒီနေရာကနေ ရှောင် သွားတော့မယ်။ ဒါပေတဲ့ ချကုန်ပြီဟေ့ ဆိုတဲ့ စကားက နှစ်ဘက်စလုံးကို ရောက်သွားပြီ။
(၃) ငွေပေးမယ်၊ မြှောက်စားမယ်ဆိုပြီး စည်းရုံးထားတဲ့ လူဆိုးလူမိုက်တွေ၊ မွဲတေနေသူတွေ
သူတို့ကတော့ တကယ်လုပ်သူတွေအကြောင်းကို ရေးသားပြောဆိုတာထက် ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဆိုပြီး အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်နေ တုန်းရော ဖြစ်ပြီးနောက်ရော ပြောဆိုရှင်းပြတဲ့သူတွေ။ ကောလာဟလတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးတဲ့ သူတွေ။ ဆွပေးတဲ့သူ၊ သားကောင်ဖြစ်ရရှာသူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ခံ ရအောင် ရေးသူတွေပါပဲ။
(၅) နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အာဏာပိုင်တွေ
သူတို့ကတော့ အဓိကရုဏ်းမှာပါသူတွေကို အကာအကွယ်ပေးတယ်။ ထောင်ကျသွားရင် ထောင်ထဲက ထုတ်ပေးတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာ ထုတ်ရလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက “ ဘယ်သူဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုရမှာတုန်း ” ဆိုပဲ။ တစ်ချို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အာဏာလက်ရှိတွေဟာ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ လက်ဝေခံ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးတဲ့ စနစ်/အဖွဲ့ကို လျှို့ဝှက်ထောက်ပံ့ကြတယ်။
စာရှုသူများခင်ဗျား . .
အဲသလို အဓိကရုဏ်းဖန်တီးရေးစနစ်ကို လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ပြီး တာဝန်တွေခွဲဝေပြီးရင် အဓိကရုဏ်းတွေကို သူတို့လိုတဲ့ အချိန် လိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်တော့တာပါပဲတဲ့။
အဓိကရုဏ်းထုတ်လုပ်မှုမှာ အဆင့် သုံးဆင့် ပါသတဲ့။
(၁) ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ (ဇာတ်တိုက်တယ် ဆိုကြပါစို့)
အုပ်စုဝင်တယောက်က တခြားမတူတဲ့ အုပ်စုဝင်တယောက်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ စော်ကားမှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလိုမျိုး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သာမန်ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ခုတုံးလုပ် ပုံကြီးချဲ့ပြီး တင်းမာမှုတွေကို ဆက်လက်ကြီးထွားနေအောင် မွေးပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတွေ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ပွားတဲ့ ဒေသတွေမှာ “ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ” ကို အမြဲမပြတ် လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ရတာပါပဲ။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကိုတော့ ချက်ချင်း မလုပ်ဆောင်ဘူး။ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ဖို့က အချိန်ကာလဆိုတာ ကလည်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။ အတိုင်း အတာကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို နိုင်ငံရေးအရပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ လုပ်ဆောင်ကြလေရဲ့။
(၃) ရှင်းပြတယ် (ဝါ) အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားတာက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြ ခြင်းဆိုတဲ့ တတိယအဆင့်ပါပဲ။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင် ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ လူထုသဘောထားအမြင်ကို ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေ ပါဝင်လာကြပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူတိုင်းမဟုတ်ရင်တောင် သာမန်လူတွေရဲ့ ယေဘုယျအမြင်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆိုတာ ရုတ်တရက် ကောက်ကာငင်ကာ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးတွေမှာ မြစ်ဖျားခံပြီး ပါဝင်လာကြတာ။ ကြိုတင် ခန့်မှန်းရခက်ခဲပြီး ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ လူတွေလက်ခံလာအောင် လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အဓိကရုဏ်းတွေ သတ်ဖြတ်မှုတွေဆိုတာ ကြိုတင်အကွက်ချ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒေါသတွေ အကြောက်တရားတွေကြောင့် ပူထူ နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက လုပ်ဆောင်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကရုဏ်းထဲမှာပါနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက တမင်တကာ သွေးကြွလာအောင် ဆွပေး ခံထားရတာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းမသိရတဲ့အဖွဲ့တွေ အုပ်စု တွေက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ညွှန်ပြနေတဲ့ သတိပေး အချက်ပြ သင်္ကေတတွေ လည်း ရှိတာများပါတယ်။
ရှင်းပြခြင်း အဆင့်မှာ တကယ်ကျူးလွန်သူတွေ တကယ်တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေတဲ့ မဆိုင်တဲ့သူတွေအပေါ် အပြစ်တွေ ပုံချကြပါတယ်။ အဲဒီလို ပုံချနိုင်မှပဲ တကယ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိနိုင်တော့ပဲ အခြေအနေတွေက ရှုပ်ထွေးဝေဝါးသွားပါ တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လွှဲချအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာ ကြောင့် နောက်နောင် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လွယ်ကူသွားရောတဲ့။
အဓိကရုဏ်းတွေ အဆင့်ထိကို ရောက်သွားဖို့ဆိုရင် အောက်ပါ အချက်အလက်တွေ အတော် များများ တပြိုင်နက်တည်း ရှိနေဖို့လိုတယ်ပါ။
• ပထမဆုံး အယူအဝါဒသွတ်သွင်းရေး၊ ဝါဒဖြန့်ချိရေး ယန္တရားကြီးကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှား၊ သွေးဆူနေပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွေ ရှိနေရမယ်။ လူမှု အသိုက်အဝန်းကို အခြေခံပြောဆိုစည်းရုံးနေမှုတွေလည်း ထင်ရှားရှိနေရမယ်။ လူအတော်များများ စိတ်ထဲမှာ ဒီကောင်တွေကတော့ကွာ၊ ငါတို့ ချပစ်မှ ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ငါတို့တော့ ဒီကောင်တွေရန်က ကာကွယ်မှ ဖြစ်တော့မယ် . . စတဲ့ စိတ်အခြေအနေလည်း ရှိနေရမယ်။ ဒါ့အပြင် တနေရာတည်းမှာ အတူ သိပ်သိပ်သည်းသည်း စုဝေးနေထိုင်တဲ့ အုပ်စုနှစ်ခု (လူနည်းစုနဲ့ လူများစု) လည်းရှိရမယ်။
• ဒုတိယ၊ “ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးဖို့ လေ့ကျင့်ထားတဲ့၊ အရက်တွေ ကြွဆေးတွေ စသည်ဖြင့် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တက်ကြွအောင်ဖန်တီးထားတဲ့လူစု” လူစုလူဝေးလိုက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေအောင် ဖန်တီးတဲ့ အုပ်စုတွေလည်း ရှိထားရမယ်။
• တတိယ၊ အဓိကရုဏ်းတွေ တကယ်ဖြစ်လာရင် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆထားတဲ့ စီးပွားရေးသမားလူတန်းစား (Business class) လည်း ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါမှပဲ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်အောင် ဆွပေးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို အဲဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေက ထိထိရောက်ရောက် ဆန့်ကျင် မနေတော့မှာ ဖြစ်တယ်။
• စတုတ္ထ၊ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာရင် စဉ်းစားတွက်ချက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးခွင် (Political context) နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွား (Political interest) တွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ် လို့လည်း ယူဆထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိရပါတယ်။ (အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာရင် အကျိုးအမြတ်တွေ ပေါ်လာမယ် လို့ နိုင်ငံရေးအာဏာရထားသူတွေက ယူဆမထားရင် ဒါမှမဟုတ် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာရင် နိုင်ငံရေးအာဏာရနိုင်မယ်လို့ မရသေးသူတွေကလည်း ယူဆမထားဘူးဆိုရင် အကြီးစား အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါမှမဟုတ် သေးငယ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တွေကနေတဆင့် ကြီးမားတဲ့ အဖြစ်တွေဆီကို ကူးပြောင်းမသွားနိုင်)
• ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ ဘာမှ မလှုပ်ရှားဘဲ ထိုင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ဖို့ စတင်တာစူနေတဲ့ အစပိုင်းမှာ ထိုင်နေဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေး စိတ်ဆန္ဒသာ အမှန်တကယ်ရှိရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ပြင်းထန်လွန်ကဲမသွားခင်မှာ ထိထိရောက်ရောက် လျင်လျင် မြန်မြန် အရေးယူလုပ်ဆောင်ပြီး ထိန်းလိုက်နိုင်မှာပါ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု တွေသာ မြန်ဆန်မယ်ဆိုရင် အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကို ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ကာစ အဓိကရုဏ်း တွေတောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လျင်မြန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိမနေတဲ့ အပြင် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားတွေ (စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားတွေ လည်း တစိတ်တပိုင်းပါဝင်) ပါရှိနေပြီဆိုရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာတော့မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါပဲ။ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိတာ၊ အရည်အချင်းမပြည့်ဝတာ၊ တက်တက်ကြွကြွ မရှိတာ၊ ပေါလျော့တာတို့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ဖြစ်ရတာပဲလို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။
အဖျက်စနစ်ကြီးဟာ သူတို့ကို လူမသိရလေအောင် တံဆိပ် အမှားများလည်း ကပ်ပါတယ်။
• ယခုလက်တွေ့ ဖြစ်ရှိခဲ့တာတွေကို “ လူမှုအသိုက်အဝန်း အကြမ်းဖက်မှု ” “ လူမှုအသိုက်အဝန်း ပဋိပက္ခ ” (Communal conflict) လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတွေ (riots) တောခြောက်သတ်ဖြတ်မှုတွေ (Pogroms) လို့ ပြောရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံပါတယ်။
• တံဆိပ်မှားကပ်တာကြောင့် အဓိကရုဏ်းတွေ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို တကယ်လှုံ့ဆော် သွေးထိုး သူတွေ၊ ပြင်ဆင်ပေးသူတွေ၊ အကောင်အထည်ဖော်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အုပ်စုတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဌာနတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ တာဝန် ရှိမှုတွေကို ဖုံးကွယ်ထားဖို့ လွယ်ကူသွားပါတယ်။
• အဓိကရုဏ်းတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ “ လူမှုအသိုက်အဝန်း ပဋိပက္ခ ” လို့ ခေါင်းစဉ်မှား တပ်တာကြောင့် ဖြစ်ပွားထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ အုပ်စု ၂ ခု ပါဝင်နေပြီး သူတို့ နှစ်ဘက် စလုံးက တာဝန်ရှိတယ် ဒုက္ခသုက္ခတွေ ထိခိုက် သေဆုံးမှုတွေကို ညီတူမျှတူ ခံစားကြရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး မှားယွင်းပေါ်လွင် သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ တဘက်ဘက်ပဲ အများကြီး ထိခိုက် ပျက်စီး သေကျေပျက်သုဉ်းကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဘက်ဘက်ကပဲ အဓိကရုဏ်းတွေ၊ သတ်ဖြတ် မှုတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ကျောကော့နေအောင် ခံကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
• ရုတ်တရက် တုံ့ပြန်မှု ( Spotaneous mass response) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ အာဏာပိုင်တွေ၊ မီဒီယာတွေ၊ သဘောထားအမြင် ထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေ၊ ပညရှင်တချို့က ပြောပေးကြပါတယ်။ အဲဒီလို လွဲမှားအပြစ်ပုံချမှု (Blame – displacing claim) က “ အင်စတီကျူးရှင်းဆန်ဆန် စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးခြင်း” မှာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘရတ် ရဲ့ သုတေသနတွေက ပြနေပါတယ်။
အဖျက်စနစ်ကြီးကိုလည်း နားလည်ချင်ရင် မေးခွန်းတွေ ထုတ်သင့်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လက မိတ္ထီလာမှာ၊ မေလက လားရှိုးနဲ့ ၂၀၁၄ ဇူလိုင်က မန္တလေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ မေးခွန်းထုတ်ချင် ထုတ်လို့ရတယ်။
(၁) အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ သီးခြားဖြစ်ရပ်တွေဆိုတာ မရှိဘူး မဟုတ်လား။ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ထုတ်ပါ။
– စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေနဲ့ တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မွေးတာလဲ။
– ဘယ်လိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဘယ်သူတွေက ထုတ်လုပ်တာလဲ။
– နားလည်မှုတွေ လွဲအောင် ဘယ်သူတွေက အနက်ပြန်နေတာလဲ။
– လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေရှိပေတဲ့ ဘယ်သူတွေက ဘာကြောင့် မတားဆီးတာလဲ။
– လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေဖြစ်ရင် ဘယ်သူတွေက အကျိုးအမြတ် ထွက်မှာလဲ။
(၂) နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ (ဥပမာ – ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ) ပါလာပြီ ဆိုရင် ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးကို အကြောင်းပြုပြီး လူတွေကို စည်းရုံးကြတော့မှာကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အရှုံးအနိုင်တွေ ကြီးမားလာတော့မှာပါ။
အစပထမမှာ အဓိကရုဏ်းစနစ်က သာမန် အသေးစားတွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေတဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေနဲ့ အကြိမ်အရေတွက် များများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
(၃) တိုက်ရိုက်ကျူးလွန်သူကို ဖော်ထုတ်ခြင်း အဆင့်မှာတင် မရပ်ပဲ စနစ်ကြီးရဲ့ တာဝန်ခွဲယူပုံ(ဝါ) တခြား ကျူးလွန်သူတွေကို ဖော်ထုတ်သင့်ပါတယ်။
(၄) အပြစ်ပေးမခံရပဲ လွတ်မြောက်နေတာက အရေးကြီးတယ်။
အဓိကရုဏ်းကို တကယ်ထုတ်လုပ်သူတွေက တံဆိပ်မှားကပ်ခြင်းနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှားယွင်းဖွင့်ဆိုခြင်း မြူမှုန်တွေရဲ့ နောက်မှာ ပျေက်ကွယ်နေတတ်လို့ပါ။
(၅) အရေးယူတာတင် မကပဲ အရေးမယူ မလုပ်ဆောင်တာတွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။
ဘာကြောင့်လဲ။ ကြိုလည်း တားနိုင်လျက်နဲ့ ဘာကြောင့် စိတ်ဆန္ဒ မရှိတာလဲ။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျများ ပါဝင်နေလို့လား။
မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတွေလည်း ရှိတယ်။
(၁) ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို မေးလိုက်ရင် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိခြင်း၊ လူမှုရေး အရ စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်နေခြင်း၊ မြေယာနဲ့ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်တွေအတွက် အပြိုင်အဆိုင် လုယူကြ ခြင်းဆိုတဲ့ အဖြေတွေပဲ အများဆုံးပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ “ အကြောင်းအရင်းတွေ” ကို အာရုံစိုက်နေခြင်းအားဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ “ အရည်အချင်းနည်းပါးမှု” အာဏာပိုင်တွေအပိုင်းမှာ “ အားနည်းမှု” ဆိုတဲ့ အဖြေတွေဆီကိုပဲ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အကောင်အထည် ဖော်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို လေ့ကျင့်ပေး လက်နက်တပ်ဆင်ပေးရေးကို အကြံပြုကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို စနစ်မျိုးအတွင်းအောက်ခြေမှာလိုက်စားနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာ အများကြီး ပိုခက်ခဲ ပါတယ်။ အချိန်နဲ့ အခြားအရင်းအမြစ်တွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်း နိုင်သရွေ့ အဓိကရုဏ်းတွေကလည်း ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိဖြစ်ပြီး မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်လာတော့မလိုပါပဲ။
“စနစ်အတွင်းရှိ သိမ်မွေ့ နက်နဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ” ကို ပြောဆိုနေခြင်းအားဖြင့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ တာဝန်ကင်းမဲ့မှုတွေ၊ အကြီးအကျယ် ပေါ့လျော့လုပ်ဆောင်တာတွေကို ဆင်ခြင်ပေးဖုံးကွယ်လို့ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ “အတွင်းပိုင်းအထိ ရောက်နေ တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ” ကိုပြောနေခြင်းအားဖြင့် အာဏာပိုင်တွေသာ ထိထိရောက်ရောက် လျင်လျင် မြန်မြန် အရေးယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် အဓိကရုဏ်းတွေကို တားဆီးနိုင်ခဲ့မယ် ဒါမှမဟုတ် ချက်ချင်းထိန်းသိမ်းခဲ့ မယ်ဆိုတဲ့ အချက်က ပျေက်ကွယ်သွားပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အတွက် “ စနစ်အတွင်း သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ” ရှိနေပေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွေမှာတောင် အဓိကရုဏ်းတွေကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဥပမာတွေ ရှိပါတယ်။
ပြီးတော့ “ဘယ်သူအရင်စလုပ်တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မေးနေခြင်းအားဖြင့် “ဘာတွေ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မမေးမိတော့ပဲ လမ်းကြောင်းလွဲသွားပါတယ်။ “ဘယ်သူ အရင်စလုပ် တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကြောင့် အဓိကရုဏ်းအတွင်း နစ်နာခဲ့သူတွေကို အပြစ်တင်မိလျက်သား ဖြစ်သွားပြီး အပြန်အလှန် အပြစ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ ရှုပ်ထွေးပြီး ဖြေရှင်းမရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်လွန်းတာကြောင့် ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို မမြင်နိုင်ပဲ မျက်ခြေပြတ် သွားတာမျိုး မဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
(၂) သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အသေးအဖွဲလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အလားတူ ကိစ္စလေးတွေတောင်မှပဲ ကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရောယှက်နေထိုင်တဲ့ ဘာသာမတူသူတွေ အချင်းချင်း ဘာသာစကားမတူသူတွေအချင်းချင်း ရောယှက် နေထိုင်တဲ့ အခြားနေရာတွေမှာလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသေးအဖွဲ မတော်တဆဖြစ်ရပ်လေးတွေ ဖြစ်ပွား နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထဲက တချို့နေရာတွေမှာပဲ၊ တခါတလေကျမှပဲ၊ ထူးခြားတဲ့ နောက်ခံအခင်းအကျင်းတွေ ရှိနေမှပဲ၊ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကနေတဆင့် ကြီးမားတဲ့ အသေ အပျောက်များတဲ့ အချိန်ကြာမြင့်အောင်ဖြစ်ပွားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေအဖြစ်ဆီကို ရောက်သွားတာပါ။ အဓိကရုဏ်းဆိုတာက မကြာခဏ ဒါမှမဟုတ် ခဏခဏ ဖြစ်ပွားကြတာ မဟုတ်ပါ။ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ ပြားနေပြီး မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရာ နိုင်ငံတွေတောင်မှပဲ အသေးအဖွဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကတဆင့် အကြီးစားအဓိကရုဏ်းကြီးတွေ အဖြစ်ကို တခါတရံမှပဲ ရောက်ရှိသွား ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဆက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ရမှာက ဘာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာပဲ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေ ဖြစ်ပွားပြီး အဲဒီအချိန်မတိုင်မီနဲ့ အဲဒီအချိန်ပြီးနောက်မှာ ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြတာလဲ။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက် ပထမ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ နောက်တော့ ကျန်တဲ့နေရာ တွေမှာ ဖြစ်တာဟာ ဘယ်လိုလဲ။ အဓိကရုဏ်းတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက မတူညီတဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်းတွေကြား ရှေးပဝေသဏီကတည်းရှိတဲ့ အမုန်းတရား (Primordial hate လို့ ခေါ်ချင် ခေါ်ပါ) ကြောင့် ဖြစ်လာ တာပါလို့ စဉ်းစားတတ်ကြပေတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးကြားမှာ နီးကပ်တဲ့ ဆက်နွယ်မှုကတော့ အသေအချာကို ရှိတယ်လို့ ပေါလ်ဘရတ်ကတော့ အခိုင်အမာ ထောက်ပြ တယ်။ သူထောက်ပြတာက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှန်မယ်ဆိုရင် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး စနစ်ကြီးက ထုတ်လုပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်တွေ ဒီထက် ပိုတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့ တွက်ရမှာပဲ။
အူတာပရာဒက်ရ်ှစ် ပြည်နယ်ထဲက အလီဂါ ဆိုတဲ့မြို့မှာ သမိုင်းတလျှောက် ဖြစ်ပွားထားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို ဘရတ်က The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India (2013) စာအုပ်ထဲမှာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ထားပါတယ်။ အလီဂါဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဓိကရုဏ်းအများဆုံးဖြစ်ပွားရာ မြို့တွေထဲက တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့မှာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ အများအပြားနေထိုင်ကြပြီး မြို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အချက်အချာနေရာမှာ ဂျမားမာဆစ်ဂ်ျ ဗလီကြီး ရှိပါတယ်။ အလီဂါ မွတ်စလင် တက္ကသိုလ် Aligarh Muslim University (AMU) လည်း ရှိပါတယ်။ စစ်မာန် ဝင်နေတဲ့ ဟိန္ဒူတွေနဲ့ တခြားသူတွေ အမြင်မှာတော့ AMU က ပါကစ္စတန် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အယူအဆ တွေ ထုတ်လုပ်ပေးရာ နေရာ၊ ပါကစ္စတန်ကို သစ္စာခံသူတွေအတွက် အဓိက ခိုလှုံခွင့်ပေးရာ နေရာ၊ အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေဆီကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ ဝင်ရောက် (ချဲ့ကားပြောတာလည်း နည်းနည်းပါသလို၊ မှားတာလည်း နည်းနည်းပါတယ်) လာတဲ့ နေရာဆိုပြီး မြင်ကြပါတယ်။
၁၉၂၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း အလီဂါမှာ အဓိကရုဏ်းတွေ ၂၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၃ ကြိမ်မှာ လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ အထဲမှာမှ အဓိကရုဏ်း ၃ ကြိမ်က လွတ်လပ်ရေး မရခင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၀ ခုကတော့ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးတွေက ၁၉၇၈ နဲ့ ၁၉၈၀ အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အလီဂါ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေကတော့ ၁၉၉၀ နဲ့ ၁၉၉၁ အတွင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အလီဂါ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို သမိုင်းနဲ့ချီ ကြည့်လိုက်ရင် အဓိကရုဏ်းတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့နှုန်း(လူသေဆုံးနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်) က မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
တချို့ အချိန်ကာလတွေရောက်မှ အဓိကရုဏ်းတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ဘာကြောင့် ပြင်းထန်လာကြသလဲ၊ တချို့ အချိန်ကာလတွေမှာတော့ ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြသလဲဆိုတာကို နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အပြောင်းအလဲက ရှင်းပြနေပါတယ်လို့ ဘရတ်က အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။
• ကွန်ဂရက် ပါတီ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပထမကာလအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေမှာ လူသေဆုံးမှု အနည်းဆုံးပါပဲ။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်မှာ အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီက အချိန်ကြာမြင့်စွာ လွှမ်းမိုးထားတာကြောင့် အခြားပါတီအုပ်စုတွေအနေနဲ့ အပြင်းအထန်ပြိုင်ဆိုင်ရယူစရာ နိုင်ငံရေး နေရာမရှိ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းတွေ မရှိကြပါ။ လူထုကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စရာလည်း အကြောင်း မရှိပါ။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်တွေသာ မရှိရင် ကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေ လည်း ဖြစ်ပေါ်လာစရာ မရှိဘူးဆိုတာ အထောက်အထားတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသနေပါတယ်လို့ ဘရတ်က ဆိုပါတယ်။
• ကွန်ဂရက်ပါတီ လွှမ်းမိုးမှုကို တခြား ပြိုင်ဘက်ပါတီနှစ်ခုက စိန်ခေါ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယကာလ အတွင်းမှာ လူသေဆုံးမှု ၃ ဆလောက် မြင့်တက်လာပါတော့တယ်။ ကွန်ဂရက်ပါတီ လွှမ်းမိုးမှု ကျဆင်းလာပြီးနောက်မှာတော့ ပါတီတွေ အသီးသီးက ဝင်ရောက်နေရာယူချင်စရာ နိုင်ငံရေး လစ်လပ်နေရာတစ်ခု ရှိလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• ၁၉၉၀- ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ဇန်နဝါရီ အဓိကရုဏ်းကြီး အပါအဝင် နောက်ဆုံးကာလတွေ အတွင်းမှာတော့ အဓိကရုဏ်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သေဆုံးသူအရေအတွက်က အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တတိယကာလအတွင်းမှာ ပါတီတွေ အချင်းချင်းကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကာလပါ။
• အဲဒီကာလတွေ ပြီးသွားပြန်တော့လည်း အဓိကရုဏ်းတွေက မရှိသလောက် နည်းသွား၊ ဒါမှမဟုတ် မရှိတော့သလောက် ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
အဓိကရုဏ်းတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပွားကြသလဲ ဘယ်လိုလျော့နည်းကျဆင်းသွားသလဲဆိုတာကို လေ့လာ ပြီး ဘရတ်က သုံးသပ်ထားတာက “အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးက နီးနီးကပ်ကပ်ပို ဆက်နွယ်နေပါတယ်” ဆိုပဲ။
“အဓိကရုဏ်းဖန်တီးခြင်းစနစ်” မရှိရင် အဓိကရုဏ်းတွေလည်း ချက်ချင်းလက်ငင်း ထဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိလှဘူးလို့ အခြေခံအားဖြင့် ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတွေကို ထုတ်လုပ်မှာသာ ထွက်ပေါ် လာနိုင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ကြိုတင် ဇာတ်တိုက်၊ နောက်ပိုင်းကျတော့ စင်တင်ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ သေးငယ်တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေလောက်ကိုပဲ လုပ်ဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးအရ အကျိုးအမြတ်တွေ ရနိုင်စရာ ရှိတယ်ဆိုမှ ကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲတွေက အကြိတ်အနှယ် ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး အရှုံးအနိုင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကြိုတင် မပြောနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေမှာ အဓိကရုဏ်းတွေကို မောင်းဖြုတ် အသက်သွင်းဖို့က ဖြစ်နိုင်ခြေ တော်တော်များလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ “ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်းဖန်တီးခြင်း” လည်းရှိနေ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနေအထားလည်း ရှိနေရင်တောင်မှပဲ အဓိကရုဏ်းတွေကို ကြိုတင် ကာကွယ်ဖို့ ခြေလွန်လက်လွန်မဖြစ်အောင် ထိန်းဖို့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒသာ အာဏာပိုင်တွေမှာသာရှိရင် အဓိကရုဏ်း တွေကို တားဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၁ ခု နောက်ပိုင်းမှာ အဓိကရုဏ်းတွေကို ထုတ်လုပ်ချင်စရာ နိုင်ငံရေးခွင်တွေ ထင်ထင်ရှားရှား ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ဆက်ပြီးမေးစရာ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေက လူမျိုးအရ၊ ဘာသာတရားအရ ခွဲခြားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့၊ အဓိကရုဏ်းတွေကို လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ရလာစရာ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်တွေကို ဘယ်သူတွေ ရသွားနိုင်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြရမှာပါ။
၂၀၁၂ ခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းကျမှ တကျော့ပြန် အကြိတ်အနယ် ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ အတွင်း လူမှုအသိုက်အဝန်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တာရယ်၊ လက်ရှိ အာဏာရထားသူတွေကို တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ ဒီချုပ်ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ သိမ်းကျုံးအနိုင်ရမှုရယ်က တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်လား။ တိုက်ဆိုင်မှုထက် ပိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေတာလား။ (တိုက်ဆိုင်မှု ထက် ပိုတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သက်သေအထောက်အထားတော့ ပြစရာ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။)
ဆက်စပ် ဆောင်းပါး ဖတ်လိုလျှင်
This entry was posted on November 12, 2014 at 3:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “မြန်မာပြည် လူ့အသိုင်းအဝန်းကြားက ပဋိပက္ခများ”
November 12, 2014 at 9:51 am | Reply
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ၊ ၂၀၁၄
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ လူ့အသိုင်းအဝန်းတွေ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Communal conflict ခေါ်ပါတယ်။။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်လာတာပါ။ အရင်က မဖြစ်ပဲ အခုမှ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။ စေ့ငုတဲ့အခါ၊ လား … လား .. ကျွန်တော်တို့ ပြည်မှာ “ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး အဖွဲ့ ကြီး ” တည်ရှိနေပြီတဲ့ဗျ။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးတဲ့ အင်စတီကျူးရှင်း တဲ့။ အဲသည် ကြောက်စရာကြီးရှိကိုရှိတယ်လို့ ဆိုတဲ့သူက ဆိုနေကြပါပြီ။
လူတော်တော်များများက ရိပ်မိပါတယ်။ သမ္မတကြီး ကတောင် နောက်ကွယ်က လူတစ်စုဆိုတာမျိုး ပြောတာပါ။ ပေါလ်ဘရတ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ ဒါမျိုးတွေ အထူးသဖြင့် ဟိန္ဒူ-မွတ်စလင် အဓိကရုဏ်းတွေကို နှစ်ဆယ်ချီကြာအောင် လေ့လာသတဲ့။ သူ့အဆိုအရ ကျွန်တော်တို့ ပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို “ ဗုဒ္ဓဘာသာ – မွတ်စလင် တွေကြား လူ့အသိုက်အဝန်း နှစ်ခုကြားက ပဋိပက္ခများလို့ ” ပြောရင်ကို အဲသလို နာမည်တပ်တာမျိုးက မှားတယ်။ စနစ်တကျ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး စနစ်/အဖွဲ့ က အဲသလိုခေါင်းစဉ်တပ်တာမျိုးကို ကြိုက်တယ်။ ဒါမှ သူတို့ “ ဖန်တီးထုတ်လုပ် ” တာ မပေါ်မှာမို့ ပဲတဲ့။ ဆက်လက် ဖတ်ရှုတော်မူကြပါ ခင်ဗျား။
မီးမွှေးသူဆိုတဲ့အတိုင်း အသေးအဖွဲ့လေးတွေ၊ ရန်ဖြစ်တာတွေကို သတင်းပြန့် အောင်လုပ်တယ်။ တင်းမာမှုတွေပေါ်အောင် ကြီးထွားအောင် ပုံကြီးချဲ့မယ်။ အပေါ်ယံမှာတော့ အခြေအနေကို တည်ငြိမ် အေးချမ်းအောင် ထိန်းထားလိုတဲ့ ဆန္ဒ သူ့ မှာရှိသလိုလို နေမယ်။ သူဟာ စကော်လာတစ်ယောက် ပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင် တယ်။ မြန်မာကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို မွတ်စလင် ကောင်လေး တစ်ယောက်က ခိုးပြေးတာမျိုးကို သူက စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာသာခြား နှစ်ခုကြား ဈေးရောင်းရင်း စကား များတာမျိုးကိုလည်း သူက ဖော်ထုတ်နေတတ်တယ်။ အမုန်းစကားတွေ လွင့်တယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ဖြစ်ဖြစ် ရန်လိုတဲ့စကားတွေ မတူတာတွေ ကွဲပြားတာတွေ ဟောချင်ဟောတယ်။
ဒီလူတွေကတော့ လုပ်ကြတော့ဟေ့လို့ အချက်ပြပေးတဲ့သူတွေပေါ့။ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဘေးမှာ ရှိနေတာများတယ်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်အောင် ခု လုပ်မလား၊ မလုပ်သေးဘူးလား။ လူအုပ်ကြီးကို ဘယ်လိုစုစည်းမယ်၊ ဘယ်လမ်းကြောင်း ခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ နည်းနာတွေ တတ်တယ်။ တကယ်တော့ အချက်ပြသမားဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတဲ့။ စပါယ်ရှယ်လစ်ဆိုပဲ။ သူက အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင် အချက်ပြတယ်။ ပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေမှာ အလွန် အမင်း ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေ ပါလာပြီ။ ခဲနဲ့ စတင်ပေါက်တဲ့သူပေါ့။ ဒီနောက်တော့ အဲဒီနေရာကနေ ရှောင် သွားတော့မယ်။ ဒါပေတဲ့ ချကုန်ပြီဟေ့ ဆိုတဲ့ စကားက နှစ်ဘက်စလုံးကို ရောက်သွားပြီ။
သူတို့ကတော့ တကယ်လုပ်သူတွေအကြောင်းကို ရေးသားပြောဆိုတာထက် ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးဆိုပြီး အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်နေတုန်းရော ဖြစ်ပြီးနောက်ရော ပြောဆိုရှင်းပြတဲ့သူတွေ။ ကောလာ ဟလတွေကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးတဲ့ သူတွေ။ ဆွပေးတဲ့သူ၊ သားကောင်ဖြစ်ရရှာသူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ခံ ရအောင် ရေးသူတွေပါပဲ။
အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကိုတော့ ချက်ချင်း မလုပ်ဆောင်ဘူး။ အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ဖို့က အချိန်ကာလဆိုတာကလည်း နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာပါ။ အတိုင်း အတာကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို နိုင်ငံရေးအရပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ လုပ်ဆောင်ကြလေရဲ့။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အဓိကရုဏ်းတွေ သတ်ဖြတ်မှုတွေဆိုတာ ကြိုတင်အကွက်ချ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒေါသတွေ အကြောက်တရားတွေကြောင့် ပူထူ နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက လုပ်ဆောင်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကရုဏ်းထဲမှာပါနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက တမင်တကာ သွေးကြွလာအောင် ဆွပေးခံထားရတာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိရတဲ့အဖွဲ့တွေ အုပ်စု တွေက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ညွှန်ပြနေတဲ့ သတိပေး အချက်ပြ သင်္ကေတတွေ လည်း ရှိတာများပါတယ်။
• စတုတ္ထ၊ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာရင် စဉ်းစားတွက်ချက်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးခွင် (Political context) နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွား (Political interest) တွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့လည်း ယူဆထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိရပါတယ်။ (အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်လာရင် အကျိုးအမြတ်တွေ ပေါ်လာမယ်လို့ နိုင်ငံရေးအာဏာရထားသူတွေက ယူဆမထားရင် ဒါမှမဟုတ် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာရင် နိုင်ငံရေးအာဏာရနိုင်မယ်လို့ မရသေးသူတွေကလည်း ယူဆမထားဘူးဆိုရင် အကြီးစား အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါမှမဟုတ် သေးငယ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တွေကနေတဆင့် ကြီးမားတဲ့ အဖြစ်တွေဆီကို ကူးပြောင်းမသွားနိုင်)
• ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေ ဘာမှမလှုပ်ရှားဘဲ ထိုင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ဖို့ စတင်တာစူနေတဲ့ အစပိုင်းမှာ ထိုင်နေဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေး စိတ်ဆန္ဒသာ အမှန်တကယ်ရှိရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ပြင်းထန်လွန်ကဲမသွားခင်မှာ ထိထိရောက်ရောက် လျင်လျင် မြန်မြန် အရေးယူလုပ်ဆောင်ပြီး ထိန်းလိုက်နိုင်မှာပါ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု တွေသာ မြန်ဆန်မယ်ဆိုရင် အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကို ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ကာစ အဓိကရုဏ်း တွေတောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လျင်မြန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း ရှိမနေတဲ့ အပြင် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားတွေ (စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားတွေ လည်း တစိတ်တပိုင်းပါဝင်) ပါရှိနေပြီဆိုရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာတော့မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါပဲ။ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိတာ၊ အရည်အချင်းမပြည့်ဝတာ၊ တက်တက်ကြွကြွ မရှိတာ၊ ပေါလျော့တာတို့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ဖြစ်ရတာပဲလို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။
• အဓိကရုဏ်းတွေ၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပေတဲ့ “ လူမှုအသိုက်အဝန်း ပဋိပက္ခ ” လို့ ခေါင်းစဉ်မှား တပ်တာကြောင့် ဖြစ်ပွားထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ အုပ်စု ၂ ခု ပါဝင်နေပြီး သူတို့ နှစ်ဘက် စလုံးက တာဝန်ရှိတယ် ဒုက္ခသုက္ခတွေ ထိခိုက် သေဆုံးမှုတွေကို ညီတူမျှတူ ခံစားကြရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး မှားယွင်းပေါ်လွင်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ တဘက်ဘက်ပဲ အများကြီး ထိခိုက် ပျက်စီး သေကျေပျက်သုဉ်းကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တဘက်ဘက်ကပဲ အဓိကရုဏ်းတွေ၊ သတ်ဖြတ် မှုတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ကျောကော့နေအောင် ခံကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အရေးယူတာတင် မကပဲ အရေးမယူ မလုပ်ဆောင်တာတွေ ကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။
“စနစ်အတွင်းရှိ သိမ်မွေ့ နက်နဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ” ကို ပြောဆိုနေခြင်းအားဖြင့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ တာဝန်ကင်းမဲ့မှုတွေ၊ အကြီးအကျယ် ပေါ့လျော့လုပ်ဆောင် တာတွေကို ဆင်ခြင်ပေးဖုံးကွယ်လို့ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ “အတွင်းပိုင်းအထိ ရောက်နေ တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ” ကိုပြောနေခြင်းအားဖြင့် အာဏာပိုင်တွေသာ ထိထိရောက်ရောက် လျင်လျင် မြန်မြန် အရေးယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် အဓိကရုဏ်းတွေကို တားဆီးနိုင်ခဲ့မယ် ဒါမှမဟုတ် ချက်ချင်းထိန်းသိမ်းခဲ့ မယ်ဆိုတဲ့ အချက်က ပျေက်ကွယ်သွားပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အတွက် “ စနစ်အတွင်း သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ” ရှိနေပေတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားရာ နေရာတွေ မှာတောင် အဓိကရုဏ်းတွေကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဥပမာတွေ ရှိပါတယ်။
(၂) သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အသေးအဖွဲလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အလားတူ ကိစ္စလေးတွေတောင်မှပဲ ကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ရောယှက်နေထိုင်တဲ့ ဘာသာမတူသူတွေ အချင်းချင်း ဘာသာစကားမတူသူတွေ အချင်းချင်း ရောယှက် နေထိုင်တဲ့ အခြားနေရာတွေမှာလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသေးအဖွဲ မတော်တဆဖြစ်ရပ်လေးတွေ ဖြစ်ပွား နေကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထဲက တချို့နေရာတွေမှာပဲ၊ တခါတလေကျမှပဲ၊ ထူးခြားတဲ့ နောက်ခံ အခင်းအကျင်းတွေ ရှိနေမှပဲ၊ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကနေတဆင့် ကြီးမားတဲ့ အသေ အပျောက်များတဲ့ အချိန်ကြာမြင့်အောင်ဖြစ်ပွားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေ အဖြစ်ဆီကို ရောက်သွားတာပါ။ အဓိကရုဏ်းဆိုတာက မကြာခဏ ဒါမှမဟုတ် ခဏခဏ ဖြစ်ပွားကြတာ မဟုတ်ပါ။ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲ ပြားနေပြီး မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရာ နိုင်ငံတွေတောင်မှပဲ အသေးအဖွဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကတဆင့် အကြီးစားအဓိကရုဏ်းကြီးတွေ အဖြစ်ကို တခါတရံမှပဲ ရောက်ရှိသွား ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဆက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ရမှာက ဘာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာပဲ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေ ဖြစ်ပွားပြီး အဲဒီအချိန်မတိုင်မီနဲ့ အဲဒီအချိန်ပြီးနောက်မှာ ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြတာလဲ။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက် ပထမ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ နောက်တော့ ကျန်တဲ့နေရာ တွေမှာ ဖြစ်တာဟာ ဘယ်လိုလဲ။ အဓိကရုဏ်းတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက မတူညီတဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်းတွေကြား ရှေး ပဝေသဏီကတည်းရှိတဲ့ အမုန်းတရား (Primordial hate လို့ ခေါ်ချင် ခေါ်ပါ) ကြောင့် ဖြစ်လာတာပါလို့ စဉ်းစားတတ်ကြပေတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်ငံရေးကြားမှာ နီးကပ်တဲ့ ဆက်နွယ်မှုကတော့ အသေအချာကို ရှိတယ်လို့ ပေါလ်ဘရတ် ကတော့ အခိုင်အမာ ထောက်ပြ တယ်။ သူထောက်ပြတာက မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်မှန်မယ်ဆိုရင် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရေး စနစ်ကြီးက ထုတ်လုပ်တဲ့ အကြမ်းဖက်တွေ ဒီထက် ပိုတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့ တွက်ရမှာပဲ။
အူတာပရာဒက်ရ်ှစ် ပြည်နယ်ထဲက အလီဂါ ဆိုတဲ့မြို့မှာ သမိုင်းတလျှောက် ဖြစ်ပွားထားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို ဘရတ်က The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India (2013) စာအုပ်ထဲမှာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ထားပါတယ်။ အလီဂါဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အဓိကရုဏ်းအများဆုံးဖြစ်ပွားရာ မြို့တွေထဲက တမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့မှာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ အများအပြားနေထိုင်ကြပြီး မြို့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အချက်အချာနေရာမှာ ဂျမားမာဆစ်ဂ်ျ ဗလီကြီး ရှိပါတယ်။ အလီဂါ မွတ်စလင် တက္ကသိုလ် Aligarh Muslim University (AMU) လည်း ရှိပါတယ်။ စစ်မာန် ဝင်နေတဲ့ ဟိန္ဒူတွေနဲ့ တခြားသူတွေ အမြင်မှာတော့ AMU က ပါကစ္စတန် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အယူအဆ တွေ ထုတ်လုပ်ပေးရာ နေရာ၊ ပါကစ္စတန်ကို သစ္စာခံသူတွေအတွက် အဓိက ခိုလှုံခွင့်ပေးရာ နေရာ၊ အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေ ဆီကနေ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေ ဝင်ရောက် (ချဲ့ကားပြောတာလည်း နည်းနည်းပါသလို၊ မှားတာလည်း နည်းနည်းပါတယ်) လာတဲ့ နေရာဆိုပြီး မြင်ကြပါတယ်။
၁၉၂၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်း အလီဂါမှာ အဓိကရုဏ်းတွေ ၂၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၃ ကြိမ်မှာ လူသေဆုံးမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ အထဲမှာမှ အဓိကရုဏ်း ၃ ကြိမ်က လွတ်လပ်ရေး မရခင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၀ ခုကတော့ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးတွေက ၁၉၇၈ နဲ့ ၁၉၈၀ အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အလီဂါ အဓိကရုဏ်းကြီးတွေကတော့ ၁၉၉၀ နဲ့ ၁၉၉၁ အတွင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တချို့ အချိန်ကာလတွေရောက်မှ အဓိကရုဏ်းတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲ၊ အဓိကရုဏ်းတွေ ဘာကြောင့် ပြင်းထန်လာကြသလဲ၊ တချို့ အချိန်ကာလတွေမှာတော့ ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြသလဲဆိုတာကို နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အပြောင်းအလဲက ရှင်းပြနေပါတယ်လို့ ဘရတ်က အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။၏
• ကွန်ဂရက် ပါတီ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပထမကာလအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေမှာ လူသေဆုံးမှု အနည်းဆုံးပါပဲ။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်မှာ အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီက အချိန်ကြာမြင့်စွာ လွှမ်းမိုးထားတာကြောင့် အခြားပါတီအုပ်စုတွေအနေနဲ့ အပြင်းအထန်ပြိုင်ဆိုင် ရယူစရာ နိုင်ငံရေး နေရာမရှိ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းတွေ မရှိကြပါ။ လူထုကို သွေးထိုးလှုံ့ဆော်စရာလည်း အကြောင်း မရှိပါ။ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်တွေသာ မရှိရင် ကြီးမားတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာစရာမရှိဘူးဆိုတာ အထောက်အထားတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြသနေပါတယ်လို့ ဘရတ်က ဆိုပါတယ်။
အဓိကရုဏ်းတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပွားကြသလဲ ဘယ်လိုလေ